लिम्वूवान - विविध सामग्री: विख्यात महिलाका गुमनाम श्रीमान्
धेरै महिला राष्ट्रप्रमुखका श्रीमान्हरू मिडियामा आउन चाहँदैनन् । उनीहरू आफ्नै पेसामा सन्तुष्ट र सुखी छन् । श्रीमतीका नामबाट चिनिन चाहँदैनन् उनीहरू । जर्मनीकी एन्जेला मर्केलले चान्सलर पदको शपथ लिँदा उनका श्रीमान् कार्यक्रममा सहभागी थिएनन् । श्रीमान्ले टेलिभिजनबाटै श्रीमतीको शपथ-ग्रहण कार्यक्रम हेरे रे ! वैज्ञानिक श्रीमान् जोसिम सावर श्रीमतीका नामबाट चर्चामा आउनुभन्दा लो-प्रोफाइलमै रहेर आफ्नो करिअरमा ध्यान दिन चाहन्छन् । 'मेरा श्रीमान् भव्य छन्,' मर्केल भन्छिन् । मिडियाबाट टाढै बस्न रुचाउने सावरका बारेमा जर्मन जनतालाई त्यति जानकारी छैन ।एन्जेला मर्केलले जोसिम सावरसँग बिहे गरिन् । यो बिहे दुवैको दोस्रो बिहे हो । एन्जेलाको पहिलो बिहे अलरिच मर्केलसँग भएको थियो । तर, १९८२ मा उनीहरूको सम्बन्ध-विच्छेद भयो । एन्जेलाका सन्तान छैनन्, तर दोस्रा श्रीमान् जोसिमका भने दुई छोरा छन् । 'मेरा श्रीमान् आफ्नै करिअरमा केन्दि्रत हुन चाहन्छन्,' आफ्नो श्रीमान् अन्य देशका राष्ट्रप्रमुखजस्तै करिअर छोडेर आफ्नो पछि नलाग्नुको भेद खोल्दै मर्केल भन्छिन् ।
श्रीमतीको प्रसिद्धिमा आफूलाई सामेल गर्न नचाहने मानिसहरूमा जोसिम सावर एक्ला भने होइनन् । उनीहरू आफैँले बनाएको आफ्नो पहिचानमा विश्वास गर्छन् । तर, पुरुष राष्ट्रप्रमुख भएमा उनकी श्रीमतीमा चाहिँ यो लागू हुँदैन । संयुक्तराज्य अमेरिकाकै कुरा गरौंँ । बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएपछि आफ्नो सम्पूर्ण करिअर छोडेर श्रीमान्को पछि लाग्ने करिअर बनाएकी छिन् श्रीमती मिसेल ओबामाले । विदेश-भ्रमणमा पनि श्रीमान्सँगै, अन्य समारोहमा पनि सँगै ! आफ्नो सम्पूर्ण पहिचान बिर्सेर उनी श्रीमान्कै पहिचानका पछाडि लागेकी छिन् । ओबामाको राष्ट्रपतीय चुनाव अभियानमा सहयोग गर्न आफ्नो एकदम राम्रो जागिर छोडेकी थिइन् मिसेलले । चुनाव अभियानपछि उनले जागिर खान सुरु गर्लिन् वा कुनै काममा केन्दि्रत होलिन् भन्ने आशंका धेरैले गरेका थिए । तर, मिसेलले पूर्णतः श्रीमान्को नामबाट आफूलाई चिनाउने निर्णय गरिन् । उनको यस कदमको कैयौँ नारीवादीले विरोधसमेत गरेका थिए ।
भारतकी पहिलो महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलका श्रीमान् पनि शिक्षाक्षेत्रमा संलग्न छन् । उनी पनि मिडियाको स्पटलाइटबाहिर नै बस्न रुचाउँछन् । पाटिल र उनका श्रीमान् मिलेर महाराष्ट्रमा विद्या शिक्षा प्रसारक मण्डलको स्थापना गरेका छन् । यो संस्थाले महाराष्ट्रमा शिक्षाक्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । प्रतिभा पाटिलका श्रीमान् देवीसिंह सेखावत यही संस्थामा काम गर्छन् । उनीहरूका एक छोरा र एक छोरी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहकी श्रीमती हरेक औपचारिक भ्रमणमा श्रीमान्सँगै हुन्छिन् । तर, राष्टपति पाटिलका श्रीमान् भ्रमण तथा औपचारिक कार्यक्रममा श्रीमतीसँग जाँदैनन् ।
बंगलादेशमा पनि अहिले महिला राष्ट्राध्यक्ष छिन् । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका श्रीमान् वाजेद मियाको मुटुरोगबाट सन् २००९ मा मृत्यु भयो । उनी आणविक वैज्ञानिक थिए । उनी परमाणु ऊर्जा आयोगका पूर्वसभापति पनि थिए । श्रीमती राजनीतिमा सहभागी भए पनि श्रीमान् आफ्नै अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लागिरहे । हसिना र मियाको बिहे सन् १९६८ मा भएको थियो । उनीहरूका दुई सन्तान छन् । दुवै अमेरिकामा छन् ।
यसैगरी, आइसल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जोना सिगुरडारडोटिर विश्वकै पहिलो समलिंगी प्रधानमन्त्री हुन् । ६६ वर्षीया जोनाले सन् १९६२ देखि एयरहोस्टेज भएर २२ वर्ष काम गरिन् । उनी व्यवस्थापनकी विद्यार्थी हुन् । राजनीतिमा लागेपछि उनले अशक्त, अपांग र रोगीहरूका लागि गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उनलाई सन्त जोना वा सेन्ट जोना भन्ने गरिएको छ । उनका पूर्वपति बैंकरका तर्फबाट दुई छोरा र ६ नातिनातिना छन् । उनकी अहिलेकी समलिंगी पाटर्नर लेखिका तथा कार्टुनिस्ट हुन् । जोनासँग उनकी पार्टनर भ्रमण तथा औपचारिक समारोहमा सामेल हुँदिनन् ।
आयरल्यान्डमा पनि अहिले महिला राष्ट्रपति छिन् । मेरी म्याकएलिजे १९९७, ११ नोभेम्बरमा आयरल्यान्डकी आठौँ राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भइन् । त्यसपछि २००४, १ अक्टोबरमा उनी पुनः निर्वाचित भइन् । उनका श्रीमान् डा. मार्टिन म्याकएलिज हुन् । उनी एकाउन्टेन्ट तथा दन्त-चिकित्सक हुन् । उनीहरूका तीन सन्तान छन् । पूर्वपत्रकार मेरी म्याकएलिजले लामो समयसम्म रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेसनमा काम गरेकी थिइन् ।
युक्रेनकी प्रधानमन्त्री युलिया तिमोसेन्कोका श्रीमान् ओलेसान्दर तिमोसेन्को कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीका छोरा हुन् । ओलेसान्दर र युलियाको भेट मिसकलमार्फत भएको हो । ओलेसान्दरले 'रङ' नम्बर डायल गर्न पुगे । फोन युलियाले उठाइन् । फोन गलत ठाउँमा परेको थाहा भयो । तर, फेरि पनि ओलेसान्दरले युलियालाई फोन गरे । उनीहरूबीच प्रेम भयो । दुवैले सन् १९७९ मा बिहे गरे । उनीहरूकी एक छोरी छिन् । ओलेसान्दर युक्रेनको संयुक्त ऊर्जा व्यवस्था निगमका कार्य समितिका सदस्य थिए । सरकारी पैसाको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनलाई निगमका निर्देशकसहित २००१ मा पक्राउ गरिएको थियो । आठ लाख डलर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोप उनीहरूलाई लगाइएको थियो । उनलाई जेलचलान गरियो । कर कानुनको दुरुपयोग गरेको आरोप श्रीमान्-श्रीमती दुवैलाई लागेपछि श्रीमती युलिया पनि पक्राउ परिन् । २००२ मा पर्याप्त प्रमाण नभएका कारण श्रीमान् आलेसान्दरविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिइयो । २००२ को मेमा नै युलिया र आलेसान्दरविरुद्ध कर कानुन उल्लंघन गरेको मुद्दा आधारहीन भएको अदालतले फैसला गर्‍यो । श्रीमान्-श्रीमती सार्वजनिक स्थलमा प्रायः सँगै देखिँदैनन् ।
युलिया डिसेम्बर १९९९ देखि जनवरी २००१ सम्म युक्रेनको उपप्रधानमन्त्री भइन् । त्यसपछि २००५ मा उनी प्रधानमन्त्री भइन् । राजनीतिमा आउनुअघि उनी आर्थिक व्यवस्थापकका रूपमा यन्त्रहरू निर्माण गर्ने एक संस्थामा काम गर्थिन् ।
चिलीकी महिला राष्ट्रपति मिसेल ब्यासेलेट चिकित्साशास्त्रकी विद्यार्थी भए पनि राजनीतिमा प्रवेश गरिन् । १९५१ सेप्टेम्बर २९ मा चिलीको राजधानी सेन्टियागोमा जन्मिएकी मिसेलका तीन सन्तान छन् । उनको श्रीमान्सँग सम्बन्ध-विच्छेद भइसकेको छ । राष्ट्रपतिपदमा चुनाव लड्नका लागि उनले २००४ अक्टोबर १ मा रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिइन् । २००६, जनवरी १५ मा भएको मतदानमा ५३.५ प्रतिशत मत पाएर उनी चिलीकी पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन् ।
गणतन्त्र फिनल्यान्डकी ११ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा तार्जा हालोनेन निर्वाचित भएकी छिन् । उनी सन् २००० मार्च १ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी हुन् । उनी पुनः २००६ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् । उनी कानुनकी स्नाकोत्तर हुन् । फिनिस टे्रड युनियनमा वकिलका रूपमा १९७० मा काम सुरु गरेकी उनले १९७१ मा राजनीतिक जीवन सुरु गरिन्
। तार्जाले १९७१ मा सोसिएल डेमोक्रेटिक पार्टीको सदस्यता लिइन् । १९७४ देखि उनको क्रियाशील राजनीतिक जीवन सुरु भयो । १९७४ मा उनी प्रधानमन्त्रीको संसदीय सेक्रेटरी नियुक्त भइन् । सन् १९७९ मा पहिलोपटक उनी सांसद निर्वाचित भइन् । उनी लगातार चारपटक सांसद निर्वाचित भइन् । आफ्नो कार्यकालमा मानवअधिकार, लोकतन्त्र, नागरिक समाज, सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रपतिका रूपमा समेत उनी परिचित छिन् ।
तार्जाका श्रीमान् कानुन व्यवसायी हुन् । तार्जाका श्रीमान् पेन्टी रार्जाभीले काननुमा पिएचडी गरेका छन् । उनीहरूका एक छोरी छिन् । रार्जाभी पनि मिडियामा आउन त्यति रुचाउँदैनन् । राष्ट्रपति श्रीमतीको पछि लागेर विदेश-भ्रमण तथा औपचारिक कार्यक्रममा जानुभन्दा आफ्नो करिअरमा ध्यान दिन चाहन्छन् रार्जाभी ।
फिलिपिन्सकी राष्ट्रपति ग्लोरिया अर्रोयो फिलिपिन्सकी १४ औँ राष्ट्रपति तथा दोस्रो महिला राष्ट्रपति हुन् । ग्लोरियाका बाबु पनि फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति हुन् । ६२ वर्षीया ग्लोरिया जनवरी २०, २००१ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी हुन् । उनी १९९२ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । ग्लोरियाका श्रीमान् पनि गुमनाम नै छन् । ग्लोरियाका श्रीमान् होसे मिग्वेल अर्रोयो वकिल तथा व्यापारी हुन् ।
अर्जेन्टिनाकी राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेजका श्रीमान् पूर्वराष्ट्रपति नेस्टर कार्लास क्रेचनर हुन् । नेस्टर कारलोस क्रिचनर र क्रिस्टिनाका दुई सन्तान छन् । क्रिस्टिना राष्ट्रपति हुनुअघि उनका श्रीमान् अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति थिए । उनी २००१ देखि २००५ सम्म सान्ताक्रुजकी सिनेटर थिइन् । १९९८ मा उनी सान्ताक्रुज प्रान्तकी विधायिका भइन् । श्रीमान्को बुइ चढेर राष्ट्रपति बनेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । साथै, श्रीमान्को 'रबरस्ट्याम्प' मात्रै भएको आरोप पनि उनलाई लाग्ने गरेको छ ।
Posted by limbu at 8:45 AM